निकुञ्जका गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि… – PathivaraOnline
Home > समाचार > निकुञ्जका गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि…
admin August 31, 2020 August 31, 2020 समाचार	0
चितवन – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले शनिबार चित्तलको मासुसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको वटुकदल गण प्यारिधाप गुल्म र निकुञ्जको गस्ती टोलीले उनीहरुलाई राप्ती नगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरेको हो ।
निकुञ्जका अनुसार पक्राउ पर्नेमा राप्ती–६ का ३५ वर्षीया पैगी चौधरी, १९ वर्षीय साजन चौधरी, ३० वर्षीया सुमित्रा चौधरी र एक जना नाबालिग रहेका छन् । उनीहरुलाई एकता सामुदायिक वनमा पा सो थापी चित्तल मा रेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । घटनास्थलमा गएको प्रहरीसहितको टोलीले चित्तलको मासु र चित्तल थाप्न प्रयोग भएको पा सो बरामद गरेको छ ।
घटनास्थलबाट १२ किलो, पैगी चौधरीको धान खेतबाट पाँच किलो र सुमित्रा चौधरीको खेतबाट एक किलो मासु बरामद भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ । अपराध प्रमाणित भएमा रु २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने! दर्शनको लागि क्लिक र शेयर गर्नु होला ! (भिडियो सहित)
अवतरणकै क्रममा यसकारण ‘ओभरसुट’ गरियो फ्लाई दुबइकाे जहाज
भर्खरै सुनसरीबाट आयो फेरी अर्को रहस्यमय घटनाको खबर(तस्विर)